Si naxariis leh warran: ma dayacno aad la taaban karo Small saar Truck! - Shiinaha Qingdao CO-NELE Group
Si naxariis leh warran: ma dayacno aad la taaban karo Small saar Truck!
gaari bamka la taaban karo Small waa mid ka mid ah ugu ballaaran loo isticmaalo qalabka dhismaha warshadaha injineernimada dhismaha. Waxaa si weyn loo isticmaalaa in construction.However kala duwan injineernimada, waxaa jiri doona qaar ka mid ah khaladaadka ku jira howlgalka ee geedi socodka of our isticmaalka maalin kasta, taas oo keeni karta in ay dib u dhac muddada dhismaha iyo dardar burburka ee machine.So ee view of this dhibaato, aynu fahmaan habka isticmaalka saxda ah ee gaari bamka la taaban karo yar si wadajir ah ula qaybta yar hal mar.
baahida loo gaari bamka Small lisidda xaddiga saxda ah ee biyaha dhuumaha siman ka hor inta ku listo shaqeeya .Qaar ka fahmi kartaa in tuubooyinka muddo dheer waa in la buuxiyey biyo ku filan si ay u sii xaqiiqda smooth.In, haddii biyo aad u badan waxaa gareeyeen inta lagu guda jiro dhismaha, waxaa jiri doona qaar ka mid ah waxyeello iyo dusaya siddo in pipes.Investigate ah ay sabab, marka la garaaco madaafiic, interface ah in madaafiic iyo taabashada biyo lagu sakhiray in ay bilowga biyo ah muddo dheer, biyaha qaada slurry cement, kalasaar foomka hoobiye, iska caabin ah bamka kordhay, slurry sababta cement meel ka mid ah giraanta maqaar dhaawacan in extrude, ka dibna u sameeyaan tube hor istaagay.
Ka hor inta ku listo Hubi dhibcood kuwan:
A. Qalabka la habsami iyo Ilbidhiqsi doonaa sida loo baahan yahay;
B. Ma buuxin haanta biyaha biyo cad ah, buuxi taangiga of bamka dufan siman leh dufan saldhig lithium saliid siman
C. The gap ee ahaa wasladdii khafiifka galaas waa in aanay noqon mid aad u weyn, haddii kale waxa keeni doonaa xaalad la mid ah sababo la baxsiga gudaha of saxarka, Marka la eego cadaadiska shubto sare oo dhulka qarqinaya ee qasabadda ugu weyn ee nabadgelyada, nidaamka cadaadiska ugu weyn laga beddeli karaa si 28MPa.
Waayo, tuubooyin codsiga, qalabka si buuxda loo kormeero waa:
1, gaari bamka yar masaafo dheer iska caabin ah laga shubto, isku day in aad la gooyaa xoodaan, oo waa inay doortaan sida ugu fog halkii ay ka yar bend.Practice ayaa cadeeyay in gacnta kasta oo dheeraad ah 90o × R1000 u dhiganta ku daray 5m siman tube.Therefore, kaliya 4 12 90o × qallooca R1000 loo adeegsaday qaabka biibiile, iyo kuwa kale ay ahaayeen 12 × tuubooyinka si toos ah 3 milyan iyo 12 × tuubooyinka toosan 2 milyan, la dherer guud ee 310m.
2.Pay fiiro gaar ah u xoojin ah ee qasabadaha iyo fiiriyey ee tuubooyinka. Long-fog bamka la kulmi kartaa tube ah in ay ku boodaan si loo kordhiyo iyo dhabar jab out.So xasuuso inaad xoojinta buuxa si loo yareeyo saamaynta ay ku soo leexdo iyo qaar ka mid ah si toos ah.
3. Ka dib markii bam, dhuumaha la waqtigii nadiifin doonaa, oo dhuumaha laba jeer in la nadiifiyaa doonaa xarunta si loo hubiyo ammaanka iyo security.What ee dheeraad ah, ee kubada fur geed isbonji la ah, waa in hore ee bacda cement ah, oo leh laba kubadaha geed isbonji la, oo lagu daray qalab lagu nadiifiyo ah.
Thanks for daawashada ~
waqti Post: Dec-25-2019